ဆန္ဒမဲပေးမယ့် ဧပြီတစ်၊ ခွပ်ဒေါင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ဆန္ဒမဲပေးမယ့် ဧပြီတစ်၊ ခွပ်ဒေါင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်
ဆန္ဒမဲပေးမယ့် ဧပြီတစ်၊ ခွပ်ဒေါင်းဘေးမှာ အမှန်ခြစ်
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Mar 17, 2012 in 2010/2012/2015 Election, Politics, Issues | 21 comments
Vote NLD ဒီချုပ်ကို မဲပေးကြပါ
နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေစုပေါင်းပြီး လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးကြဖို့ Vote NLD Campaign ဗွီဒီယို ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။
လူမင်း ၊ ဝေဠုကျော် ၊ ၀ိုင်း ၊ ရဲတိုက် ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ၊ ချစ်သုဝေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဒေါင်းစိတ်၊ ဒေါင်းမာန်၊ ဒေါင်းအလံကို သတ္တိရှိရှိ စိုက်ထူပြလိုက်ကြတဲ့ ………… “ခွပ်ဒေါင်းအနုပညာသည်များ”ကို ဂုဏ်ပြုကြိုလိုက်ပါတယ်!
သင်နှင့် သင့်ရင်သွေးများ၏ တောက်ပတဲ့အနာဂတ် အလင်းရောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ဘို့အတွက် NLD ကို မဲပေးကြပါစို့..
Voting for NLD = Loving Yourself & Your Kids’ & Country’s Future.
မဲပေးမည့်နေ့ မရောက်ခင်မှာ၊ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ လူစားရင်းမှာ မိမိနာမည်ပါ၊ မပါ အရင်ကြည့်ပါ။
မပါလျှင်၊ ပါအောင် ထည့်ခိုင်းပါ။ပါပြီဆိုလျှင်၊ မဲပေးမည့်နေ့တွင် မဲရုံကိုသွား၊ မိမိရဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကိုပြပြီး၊ မဲလက်မှတ်တစ်ခုကို ထုတ်ယူပါ။ ပြီးလျှင် လျှို့ဝှက် ဆန္ဒပြုခန်းထဲတွင် မိမိဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် စာရွက်ကို ခေါက်ပြီး၊ ဆန္ဒပြုခန်း အပြင်ဘက်က မဲပုံးထဲကို ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
မဲလက်မှတ်ကို ယူပြီးရင် ကိုယ်မဲပေးချင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ပါတီ သင်္ကေတကို သေသေချာချာကြည့်ပြီးတော့၊ အဲ့ဒီ့ဘေးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကွက်ဘောင် အတွင်းမှာအမှန်လက္ခ္ခဏာကို ပီပီပြင်ပြင်၊ ထင်ထင်ရှားရှား ခြစ်ရပါမည်။နှစ်ခွမဖြစ်ရပါ၊ နှစ်ခါမခြစ်ရပါ။
လက်မှတ်တို့၊ နာမည်တို့ အစရှိသည်တို့ဘာမှ မရေးရပါ၊၊ မတွန့်ရပါ၊ မကောက်ရပါ၊ ကြက်ခြေခတ်မခြစ်ရပါ။အမှန်ခြစ်ရင်တောင် အဖျားလေးကောက်သွားတာမျိုးတောင် မဖြစ်ရပါ။
အဲ့ဒါမျိုးဆိုပယ်မဲဖြစ်ကုန်လိမ့်မည်။ လက်တုန်၍အမှားအယွင်းခြစ်မိလျှင် နောက်ထပ် မဲလက်မှတ်အသစ်တစ်ခုထပ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ မိမိထည့်မည့်မဲကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားထည့်ရပါမည်။
ပြည်သူတွေရဲ့ သြဇာအာဏာလွှမ်းမိုးတဲ့ စနစ်ကို ဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ခေါ်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံထဲက ညာဘက်အစွန်မှ သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးအမည် သိသူများ
မတွန့်ရပါ၊ မကောက်ရပါ၊ အမှန်ခြစ်ရင်တောင် အဖျားလေးကောက်သွားတာမျိုးတောင် မဖြစ်ရပါ။
သတင်းစာထဲမှာတွေ့တာတော့ ရပါတယ် ဗျ။ အရေးကြီးတာ ကြက်ခြေမခတ်ဖို့ ။ တစ်ကွက်ထဲမှာ ဖြစ်နေဖို့ပါ။
ကျေးဇူးပါ ကိုhtoosan ရေ
အမှန်ခြစ်တတ်လျှင် မဲထည့်လို့ရပြီ တဲ့လား….
ဘုရား . . . ဘုရား . . .
မဲထည့်ဖို့ အတွက် အမှန်ခြစ်တတ်ဖို့ တစ်ခုပဲ လိုတာလား ..
အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်ရောက်နေတယ် ကိုယ့်ဆရာ . . .
link ကိုလည်း သွားကြည့်ပေးပါအုံး
စာတွေလည်း ကုန်အောင်ဖတ်ပါအုံး ကိုချစ်ရင်ထူးနှစ်ရေ..
အမှန်ကိုလည်း ရင်ထဲက ချစ်တတ်ပါစေ..
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ဦးဆောင်သူတွေဟာ.. တိုင်းပြည်မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီး.. ချိန်ခွင်လျှာ(ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်)ဇောက်ထိုးကြီးကို.. ထိန်းညှိနိုင်အောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
နိုင်ငံရေးမှာ.. အတိုက်အခံရှိမှ တိုးတက်တာပါ..။
တိုင်းပြည်မျက်နှာတခုထဲကြည့်မယ်ဆိုရင်..တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင်… အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ.. လွတ်နေတဲ့ ခုံနေရာ ၄၈ခုလုံးကို… NLD ကိုပေးလိုက်ဖို့သင့်တယ်လို့.. မြင်သာနေပါတယ်..။
၄၈နေရာလေး..မမက်မောနေပဲ.. စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့. NLD.ကို ပေးလိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါကြောင်းနဲ့.. NLD နဲ့ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံမယ့်သူတွေ.. နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်စေချင်ကြောင်း…။
NLD နဲ့မပြိုင်ပဲ.. နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်.. ဆန်ရှင်တွေလျှော့ကျသွားတာအပါအ၀င်.. တိုင်းပြည်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ် မျက်နှာပွင့်လန်းလာမှုမှာ.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအနေနဲ့..ခရက်ဒစ်.. အပြည့်ရသွားမှာဖြစ်ကြောင်း…
အောင်သောင်း။ ။ မငြိမ်ပါဘူး။ သူလို့ အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ် မလုပ်တာ တစ်ခုပါပဲ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းပုံ သဏ္ဍန်တွေဖမ်းနေတာပေါ့။ ရှိလည်းရှိမှာပေါ့။ လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ် ဆိုတဲ့ ပုံပန်းကို သုက ပြနေတာ ဒါကတော့ နိုင်ငံရေးအရ Image ကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ်။ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လုပ်လိုလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အခုလည်းပဲ ဟိုက ဒီက ခေါ်ထားရင်ရပါတယ်။ မြို့ခံတွေ ဘယ်လောက် ပေါတယ်။ နယ်ခံတွေ ဘယ်လောက်ပေါတယ်ပေါ့။ အဲ့လိုနဲ့ သူကို မဲပေးမယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဟုတ်လား။ ဘယ်သူ့မဲပေးမယ်လို့လည်း ဒီမှာ သိပ်ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဘာမှမပေးနိုင်ဘူး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာတွေက ဘာကတိမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတွေက ကတိပေးထားတဲ့သူတွေကို သရော်တာ။ ပြည်သူ့အကျိုးလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ကိုယ်မလုပ်နိုင်လို့ ဝေဖန်တဲ့ သဘောလေးလည်းဆောင်တယ်။ တကယ်တမ်းကတော့ ဒါက မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပြည်သူ့ အကျိူးပြုလုပ်တာကောင်းတယ် လို့ပြောရမှာပေါ့။ ဟုတ်လား။ ပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးတာ ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပဲပြောရမှာ။ ပြည်သူ့ အတွက် လုပ်ပေးတာ မကောင်းဘူးလို့ပြောလာတာတွေက ဒီနိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ်ကို ကျွန်တော်လည်း နားမလည်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီအဆင့်မမီဘူး။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီလိုလားတယ်။ နောက်ပြီတော့မှ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးလိုလားတယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ် နေရာတိုင်မှာပြောတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာ သူတို့သွားတာ လာတာတွေ အားလုံးက တကယ်လက်တွေ့မှာ တရားဥပဒေကို တကယ်လိုက်နာလား။ မလိုက်နာဘူးလားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ရင်သိတယ်။
သူကြီး ဘာပြောမလဲ :8
အဲဒိ သတင်းကို သစ်ထူးလွင် Blog ( http://www.thithtoolwin.com/2012/03/blog-post_1620.html )မှာဖတ်လိုက်ရတယ်။ ခဏလေးနဲ ဝိုင်းဆဲလိုက် ကြတာ comments ပေါင်း 70 ကျော်တယ်။ အဲဒီ လူကြီး ရှက်တတ်တဲ့ စိတ်ကော်ရှိ့ ရဲလား မသိဘူး။
ဟုတ်တယ် Patriot ရေ..
ကျနော်တင်တုံးက လင့်ခ် ကျန်သွားတာဗျ
လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ် ဆိုတဲ့ ပုံပန်းကို သုက ပြနေတာ ဒါကတော့ နိုင်ငံရေးအရ Image ကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လူထုတွေ တအားထောက်ခံတယ်။ ကြိုဆိုတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါက လုပ်လို့လွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။
ဆိုတာကို အရီချင်ဆုံးဘဲဗျာ.. လုပ်တဲ့နည်းမတူဘူးလေ သူတို့က တအိမ်တယောက် မလာမနေရလုပ်တာ… ဟား ဟား ငပေါကြီး
သဂျီးဆန္ဒနှင့် တသဘောထဲ ရှိပါကြောင်း။
ပထမက ကွမ်းခြံကုန်း ကနေအရွေးခံမလို့..
အလုပ်မအားလို့ ကွန်မင့်မရေးသေးပါဘူးလို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားထား သူကြီးနဲ့တွေ့ရင် ပျက်တာပဲ…
……….NLD နဲ့ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံမယ့်သူတွေ.. နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်စေချင်ကြောင်း…။”
အလှူမလိုက်ရဲမှာစိုးလို့ အတ္တကြီးကြီးနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ထားတာလေး တခု ပြောပြမယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့ လ ပိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်း ကျေးရွာတချို့ကို လျှပ်စစ်မီးပေးမယ်-စာရင်းပေး ဆိုပြီးလုပ်တယ်..။
စာရင်းသွားပေးတော့ စည်ပင်ဝန်ကြီးအစား လစ်လပ်နေရာမှာအရွေးခံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပုံနဲ့အမည်ပါ စာရွက်ထုတ်ပေးပြီး-
“စာရင်းလဲပေးသွားကြ – လာမယ့် ရွေးကာက်ပွဲမှာ သူ့ကိုလဲမဲထည့်ကြ……” လို့ …… ပြောလိုက်ကြောင်း…
ကြားလဲမကြား မြင်လဲမမြင်ဘူး ….။
တကယ်…. အဟုတ်…. မိုးကြိုးလွဲရစေရဲ့ …….
နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်သူများရှိမှာစိုးလို့ ထပ်ရှင်းရရင်-
ငါတို့လူ အမတ်မဖြစ်လို့ကတော့ မင်းတို့ တော်ရုံနဲ့ မီးမရဘူး..
ရရင်လဲ မီးပျက်မှာပဲ ဆိုတဲ့သဘော………. လို့
ဦးဦးပါလေရာက ဥပဒေနဲ့မညီ မဲဆွယ်မဲထည့်ခိုင်းတဲ့လူတွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်ရာကျပါတယ်..
တီတီရေငုံနှုတ်ပိတ်လို့… ဒါဗျဲ.. :-(
ဟဲ့ … ရှူး…. တိုးတိုးလုပ်ပါဟဲ့….
အိုက်ဒါ ရွာနာမည်နဲ့တကွ အပြင်မှာဖွပြီးပြီ…
NLD ကတော့ သတိထားမိမယ်ထင်တာပဲ……
-ဟူသောအဆိုကိုမထောက်ခံပါ။NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး(၂)ပါတီထဲမဟုတ်သောကြောင့်အခြားပါတီဝင်များ
ကျုပ်အထင်မမှားရင်.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးခေါင်းဆောင်တွေ.. NLD ကိုနေရာပေးဖို့ တွေးထားကြတယ်လို့ထင်တယ်..
လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့နဲ့.. လွှတ်တော်ကတော့.. သိသိသာသာကို .. NLD ကို ဦးစားပေးပါတယ်..။
သတင်းတွေမှာ.. မြင်မြင်သာသာ… ဖတ်နေရတာကိုး…။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအောက်ခြေပိုင်းက.. နိုင်ငံရေးကစားတာ.. သိပ်သဘောမပေါက်သလိုဖြစ်နေတယ်ထင်မိတယ်..။
တကယ့်ပြိုင်ပွဲက.. ၂၀၁၅မှ လာမှာပါ..။
အဲဒီမှာ..ပြည်ခိုင်ဖြိုးက… အနည်းဆုံးတ၀က်ပြန်ရနိုင်အောင်.. ပြင်ဆင်ဖို့သာ.. အဓိကထားသင့်တာပေါ့..။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာ.. နိုင်ငံရေးမှာ.. ညာဖက်အခြမ်း( ကွန်ဆာဗေးတစ်)ဖက်ကို.. အပါဆွဲသင့်တယ်..။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးက. ကြားဖြတ်မှာ.. .နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ပြီး.. NLD ကို တခြားပါတီတွေနဲ့.. ပြိုင်တာမျိုးဖြစ်စေရင် သာတောင်ကောင်းပါသေးတယ်..။
တကယ်တော့.. အတိုက်အခံနဲ့..မူရင်း… ၂ပါတီထဲရှိမှ တကယ်ထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်တာပါ..။
ပါတီတွေ ပွစိတက်နေရင်.. တိုင်းပြည်အတွက်..ဆိုတဲ့..ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေ ..ေ၀၀ါး.လွှင့်ပျောက်လေ့ရှိပါတယ်..
ယူအက်စ်ဆိုရင်.. ၂ပါတီထဲ..တိုင်းပြည်ကို.. တလှည့်စီအစိုးရလုပ်နေကြတာလေ…
၀င်မပြိုင်ပဲ.. ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေ.. နှုတ်ထွက်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပြီလား… ဟင်င်င်..။
ဝေးပါသေးရဲ့ သူကြီးရယ်…။ ဘွားတော်က လွဲရင်ကျန်တာတွေကို လူမှတ်တာမဟုတ်ဘူး…။ သူ့တောင်မှ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မျက်နှာပြလှအောင် ဆွဲတင်ချင်တာ…။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ NLD အရွေးခံမဲ့သူတွေ ယှဉ်ရပ်နေရင် သားအဖလောက်အသက်တွေကွာတာ…. မရှက်ဖူးလားမသိဘူး…။ ကိုယ့်တူလောက် သားလောက်တွေနဲ့ အာဏာပြိုင်လုနေတာ…။ ပြောပါတယ်…။ စိတ်ညစ်စရာကြီးပါ..။ သူကြီးကဝေးနေတော့ မမြင်ရဘူးပေါ့ …….. ဒီမှာကအနီးကပ်အကုန်မြင်နေရတော့ ပြောချင်ပါဘူးဗျာ…။ အောင်ပုလိုဆဲမိတော့မယ် တော်ဘီ
အခြားပါတီဝင်တွေ ရှိတာ မရှိတာက မာယာ ပြောစရာမလိုပါဘူး ပြည်သူလူထုက ပြောသွားပါလိမ့်မယ်။ မာယာ အဓိက လုပ်ရမှာက ကိုယ့်မဲ ကို မှန်အောင်ခြစ် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ပါတီကို မှန်အောင်ပေးဖို့ဘဲမဟုတ်လား။
ကျနော်က မဲပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မသိသူပါ …
တစ်ခါမှလည်း မပေးခဲ့ဖူးပါဘူး ….
ကျနော့်ရဲ့ ဇာတိ က ရေနံချောင်း …
နေတာက ရန်ကုန်မှာ …
မှတ်ပုံတင်ကလည်း ဇာတိ မှာ လုပ်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင် …
ကိုင်း … ဒါဖြင့် မဲပေးချင်တယ် ဆိုရင် …
ရန်ကုန်၊ နေတဲ့ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်မှာပဲ ကိုယ့် မှတ်ပုံတင်ပြပြီး မဲပေးလို့ ရမလား ခင်ဗျာ …
ဒါလေး သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော် ချစ်တဲ့ ပါတီကို ..
ကျနော်လည်း တစ်ဖက် တစ်လမ်းက ပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ မဲပေးချင်နေလို့ပါလို့ ……
ငတုံး … အံစာတုံး
ကိုအံစာ ရေ အဲ့လိုလူတွေ များလေ ကြံ့ဖွတ်က ကြိုက်လေဗျ။(ငတုံး ကို ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ) ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့လူတွေရဲ့ မဲ့ကို သူတို့ မဲထဲ ပေါင်းလိုက်ကြတာလေ။အဲ့တော့ ကိုယ်ကိုတိုင် သွားထည့်နိုင်ရင်ထည့်ပါ ။ပြောင်းဖို့ဆိုရင် အိမ်ထောင်စု စာရင်းပါ ရွေ့ရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။